काठमाडौँ । सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाउने चाया पोतो डन्डीफोरले अनुहारको सुन्दरता नै हट्छ । जति नै सुन्दर रुप भएपनि अनावश्यक रुपमा आएका यस्ता चिजले सुन्दरतामा निकै असर पुर्याएको हुन्छ । यद्यपी उपचारको लागि मानिसहरुले हजारौँ
जान्नुहोस् ! के कारण झमझमाउँछ हात खुट्टा ? यस्तो छ कारण
काठमाडौँ । हात खुट्टा झम्झमाउने समस्या प्राय धेरैमा हुने गर्छ । प्रायजसो हात खुट्टा झम्झमाउने समस्या त्यतिकै हुने गर्छ । लामो समय एउटै अवस्थामा बस्दा पनि हात खुट्टा झमझमाउने समस्या हुन्छ । यद्यपी यस्तो हुनुको
काठमाडौँ । प्राय हरेक घरको भान्सालाई सजाउनकै लागि भएपनि प्लास्टिकको भाडा प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । सस्तो सुलभ तथा सहजै उपलब्ध गर्न सक्ने भएकाले प्राय धेरै नेपालीको भान्सामा प्लास्टिकको भाँडाकुडा सजाइएको हुन्छ । यद्यपी यस्ता सामाग्रीले
३ सय किलो तौल भएकी महिलाले ४ वर्षमा कसरी घटाइन २१४ किलो तौल ? आखिर केले गर्यो जादु !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:४८0
काठमाडौँ । जन्मिदा सामान्य बच्चा जस्तै जन्मिएकी भारतकी ४२ वर्षिय अमिता राजानीको उमेर बढ्दै गएपछि शरिरको तौल पनि दिनदिनै बढ्दै गयो । निरन्तर बढ्दै गएको तौलले उनको शरिरमा समस्या पनि थपिदै गयो ताकी उनलाई हिडडुल
काठमाडौँ । सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाउनको लागि नाक तथा मुखको वरिपरि केही कालो दागहरु आएका हुन्छन् । जसले अनुहारको सुन्दरता नै हराउँछ । त्यसकारण यस्तै समस्या भएका व्यक्तिहरुको लागि केही घरेलु उपाय रहेको छ ।
काठमाडौँ । अस्तव्यस्त खानपान र व्यवस्त जिवन शैलीको कारण मानिसहरु मटोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तै समस्याको कारण मानिसहरु हरेक दिन घण्टौसम्म व्यायाम गर्नुपर्दा दिक्क भएका हुन्छन् । त्यसकारण यस्तै समस्या भएका व्यक्तिहरुको लागि
काठमाडौँ । अनुहारमा आएको डन्डीफोर तथा अन्य प्रकारका दागहरुको कारण सुन्दर अनुहार पनि कुरुप बनेको हुन्छ । यस्ता दागहरुलाई हटाउन मानिसहरुले कयौँ प्रयास गरिरहेक हुन्छन् । हजारौँ रुपैया औषधी गर्नमा खर्च गरेका हुन्छन् । यस्तै
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:३४0
काठमाडौँ । ४ हजारदेखि ९ हजार फिट सम्मको उच्च हिमाली भेगका जंगलमा समेत पाइने कुरिलो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक रहेको छ । आयुर्वेदिक औषधीको रुपमा प्रयोग गरिने कुरिलोलाई काँडा भएको र नभएको गरि दुई भागमा
के तपाईको बच्चाले माटो खाएर हैरान बनाएको छ ? अपनाउनुहोस् घरेलु यी उपाय
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:५९0
काठमाडौँ । कस्तो चिज खाने कस्तो चिज नखाने भन्ने थाहा नहुँदा सानो बच्चा बेलामा सायद तपाई हामीेले पनि थुप्रै माटो खायौँ होला । सामान्यतया सानो बच्चा बेलामा बच्चाले माटो खानुलाई सामान्य लिइन्छ । तर कतिपय